China Auto retort autoclave immersion rano ho an'ny indostrian'ny sakafo Famokarana sy ozinina | Shenlong
Rano fandefasana rano
Kettle nitafy (Cooker & mixer)
Famerenam-bola autoclave fanitrihana rano mandeha ho azy ho an'ny indostrian'ny sakafo
Rano / autoclave fanitrihana rano dia ny rano alentika ao anaty rano. Ity karazana retort ity dia mety amin'ny paosy lehibe, tavoahangy PP / PE, sns.
Famerenana anaty rano / autoclave dia ny hoe alentika anaty rano ny vokatra. Ity karazana retort ity dia mety amin'ny paosy lehibe, tavoahangy PP / PE, sns.
Endri-javatra ny Retort
1. Ny rano fanodinana dia nafanaina mialoha tao anaty fitoeran-drano ambony, ka azo hafanaina haingana ny vokatra. Ary azo ahodinaina ny rano fanodinana, noho izany ny famokarana mitohy dia mahavonjy ny fanjifana etona sy rano.
2. Milamina ny valin-teninay:
Ny varavaranay miverina dia mifamatotra mba hiantohana ny famehezana ny varavarana.
Ny vatan'ny retort rehetra dia hita ao amin'ny efitranom-pikarohanay hijerena raha tsara ny welding welding
Fitaovana valizy azo antoka, rehefa misy olana ny retort, dia afaka manokatra ny vavahady fiarovana ho an'ny tsindry fanampiana.
3. Ny faritra misy ny herinaratra dia Siemens sy Schneider hiantohana ny fihodinan'ny milina.
4. Fanaraha-maso ny mari-pana sy ny tsindry tonga lafatra mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra
Ny vilany fanamasinana dia mizara ho sosona ambony sy ambany. Ny tanky ambony dia ampiasaina indrindra hamerenana rano mafana. Ny zava-bitan'ny sterilization dia vitan'ny tanky ambany. Mba hahazoana antoka fa mitovy ny mari-pana amin'ny tanky ambany, tsy misy faran'ny maty ny fanamorana, mivezivezy haingana ny rano mafana ao anaty vilany ary mora kokoa ny fanaraha-maso ny solosaina.
Mba hahamora kokoa azy dia nataonay ireto manaraka ireto:
1. Araka ny fepetra takiana amin'ny vokatra, manafana aloha ny vilany ambony ho 0-120 ℃ (azo ovaina arakaraka ny fizotry ny vokatra), fenoy ny entana rehetra ny vilany fandrehitra raha mbola miomana mialoha, manidy ny vavahady vilany, ary sokafy ilay fitaovana mifampikasoka.
2. Rehefa avy nanondrika ny rano tanky ambony tao anaty vilany fanamasinana ho an'ny refy amin'ny haavon'ny rano, ny mpampita ny haavon'ny rano dia mivoaka 4-20 Majn amin'ny rafitra fanaraha-maso PLC, ary mihidy ho azy ny rafitra paompy rano hanaparitaka ny rano mafana ao anaty vilany.
3. Mandritra ny tsingerina, mba hiantohana ny fitoviana amin'ny fivoahan'ny rano ao anaty vilany, dia ampifandraisina amina fantsona misy teboka telo, ampifandraisina amin'ny fantsona φ108, ary avy eo ampiasaina ny paompin-drano savaivony lehibe hanafanana (ity mafana ny mpanondraka rano dia misoroka ny fanafanana mivantana ao anaty vilany) Rehefa mafana izy io dia hifandray mivantana amin'ireo entana ny etona ka hahatonga ny sasany ho be hafanana), ary avy eo mandalo teboka valo ao anaty vilany (teboka valo, mizara roa teboka , midina, havia sy havanana) mba hampidirana rano mafana mivantana ao anaty vilany fanamasinana Ho an'ny fivezivezena dia apetraka eo afovoan'ny fantsom-pohy ny valizy iray mba hampifandimbiasana ny rano mafana ary tsy hiato mba hahazoana antoka fa ny mari-pana ao anaty vilany dia .
4. Rehefa mivezivezy ny rano mafana, raha toa ka lava kokoa ny barikan'ny vilan'ny fanamainana ary lava kokoa ny elanelana isaky ny teboka tsirairay, mba hahatonga ny rano mafana hikoriana hitovy kokoa, ny fantsom-by tsy misy vy no ampiasaina ary ny ny lavaka fivoahan'ny rano dia totohondry amin'ny ilan'ny fantsona. Ny faritra ampitan'ny fantsona quincunx dia 1,2 heny noho ny faritra ampitan'ny lavaka kely). Raha raisina ny fanoherana ny rano dia kely ny lavaka fantsona ary avy eo lehibe, ary mivezivezy indray mandeha ny rano mafana ao anaty vilany.
5. Ny vilany sterilization dia afaka mahatratra ny mari-pana efa voafaritra mialoha ao anatin'ny minitra vitsy rehefa miakatra ny mari-pana. Mandritra ny fizotry ny fanafanana, miaraka amin'ny fiakarana sy ny fihenan'ny maripana ary ny fiovana kely amin'ny mari-pana amin'ny maripana tsy miova, ny valizy mifehy ny etona dia manitsy ny fidiran'ny etona mba hiantohana fa tsy hiova ny mari-pana. Rush. (Ity sarimihetsika etona mifehy ny valva ity dia mamoaka famantarana ankehitriny 4-20mA amin'ny alàlan'ny mpandefa hafanana tafiditra ao anaty fandaharana PLC ho an'ny fanidiana tsy tapaka sy fanokafana mandra-pikatony.) Ny sarimihetsika etona mifehy ny valva dia miova amin'ny fanitsiana ny mari-pana. 6. Rehefa tazonina ny tsindry dia voatazona ho azy ny tsindry amin'ny alàlan'ny mpandefa tsindry tafiditra. Ny tsindry ao anaty vilany dia azo apetraka aloha, ary ny tsindry hivoaka avy hatrany rehefa avo ny tsindry, ary ho avy eo ny tsindry raha ahena ny tsindry. Aorian'ny famonoana ireo bakteria dia alefa ao anaty vilany ambony ny rano mafana ao anaty vilany. 7. Ny vilany fanamafisana dia manokatra ny paompy mampihena rehefa ahena ny mari-pana, ary ampitaina amin'ny valizy mihoampampana Rehefa ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ny vilany fanamasinana, ny ampahany amin'ny rano mafana ao anaty vilany dia azo alefa amin'ny alàlan'ny valizy mihoampampana mba hahazoana antoka fa ny vokatra ao anaty vilany dia avoaka ao anatin'ny fotoana fohy. Mangatsiatsiaka amin'ny mari-pana napetraka.
Ny fitsipiky ny retort dia mifototra amin'ny tsindrona etona mivantana hanafanana ny rano anaty tanky ambony mankany amin'ny mari-pana efa napetraka miaraka amin'ny fivezivezena tsy tapaka amin'ny fizotran'ny rano ary amin'ny alàlan'ny fampiharana ny rivotra voafintina raha ilaina izany, izany dia mamela ny fanalefahana ny mari-pana sterilization nefa tsy misy atahorana ny fahavoazana. ny fitoeran-javatra, izay miteraka fotoana fohy indrindra ary ny kalitaon'ny vokatra tsara kokoa.
Ny etona dia atsofoka mivantana ao anaty valiny hamindroana, hisorohana ny fako etona, hitsitsy angovo.
Ny rivotra voafintina dia azo ampiharina mandritra ny tsingerina fanodinana feno, azo atao programa izy io mifanaraka amin'ny fepetra takiana ary fehezin'ny valves pneumatika ho an'ny fidiran'ny rivotra voafintina sy ny fanamaivanana ny tsindry mba hiantohana ny tsindry efa napetraka ao amin'ilay valin-teny.
Jiro fampitandremana dia famantarana ny faran'ny tsingerina, rehefa vita. Nahazo alàlana namoaka ny fanokafana ny varavarana. Vonona amin'ny dingana vaovao izy avy eo.
Mandritra ny fizotrany iray manontolo, ny vatana mihodina dia mihodina arakaraka ny hafainganam-pandehan'ny preset. (0-12R / M, manome ny hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny mpanjifa).
Ny tombony amin'ny famoahana rano anaty rano
fampidirana rano anaty rano saika afaka manodina karazana fonosana rehetra, indrindra ho an'ny sakafo fonosana banga lehibe sy tavoahangy PP. Rano fisitrihana rano roa sosona roa (miaraka amina rano mafana) afaka mamonjy rano sy etona。
MODELY 1200 * 3600 1500 * 5250
boky 4.5m3 10m3
Ny hatevin'ny vy 5mm 8mm
Mari-pana famolavolana 145 ℃ 145 ℃
Fanerena endrika 0.44Mpa 0.44Mpa
Fanerena fitsapana 0.35Mpa 0.35Mpa
ara-nofo SUS304 SUS304
Teo aloha: Rano famafazana rano Sprortization sakafo vita am-bifotsy
Manaraka: Fivarotana mafana autoclave famerenana sakafo ara-barotra ho an'ny trondro am-bifotsy
Famolavolana planeta automatique avo lenta avo lenta ...
rano mandeha ho azy cascading sterilization retort ...
Masinina retort marindrano miaraka amin'ny rano Cascading ...
Temperature mandeha ho azy Sterilizer Retort Mi ...
Rano famafazana rano Sprortization sakafo vita am-bifotsy
Steam sterilization Autoclave Retort ho an'ny sardin ...
Park Industrial Industrial Changcheng, Zhucheng, Weifang, Faritanin'i Shandong, Sina